Teendhada Shiinaha ee Tayada ah ee loo yaqaan 'Wood Wood Teve Mini Laydh' oo leh Soo-saare Lugaha Soo Saaraha iyo Alaab-qeybiye | Dabka Dahabka
Cabir: 51.2x42.5x41.8 cm (bilaa biibiile)
Miisaanka: 9.5 kg
Faahfaahinta Foornada Xaabada Yar
Teendhadeenna darbi jiifka ah ee looxyada yar yar ee lugaha lagu laabo ayaa ku habboon kuleylka iyo karinta meelaha yaryar sida teendhooyinka shiraac 12x12, tepees, yurts, shacks, guryaha yar yar iyo kuwo kaloo badan. Foornada alwaaxda ka samaysan waxay ka samaysan tahay 304 wax bir bir ah oo ka samaysan miridh iyo daxal. Naqshad sarreysa saxanka jilaagga ah ee korka ku fadhiya wuxuu ku siinayaa dusha adag ee fudud ee karinta. Ku filnaasho karinta dusha sare ee wax lagu kariyo iyo qashin qubka albaabka waxay ka dhigayaan kuleylka yaryar ee alwaax fudud inuu xakameeyo kuleylka shaqooyinka karinta. Ku xoq dabka hoose si aad uga ilaaliso salka inuu kululaado.
Saxanka dibedda ee aluminiumka dusha sare ee kuleylka kuleylka ee alwaaxku dib uma beddeli karo ka dib kululaynta adeegsiga muddada-dheer. 1 jirka wax lagu kariyo, 6pcs dhuumaha birta ah ee birta ah, 1pc birta qaboojiyaha birta ah, 2 sagxad dhinac ah, shabag 1pc, 1pc xoq xashiish. Foornadan yar ee alwaaxda gubta ma leh qaybo dabacsan oo si dhakhso leh ayaa loo rakibi karaa. Foornada alwaaxda yar aad ayey u fududahay in gacanta lagu qaado ama lagu raro gaarigaaga. Foornada alwaaxda teendhada waxaa loogu talagalay dunida dibaddeeda haddii aad degan tahay, kuleylka kuleylka, ugaarsiga, kalluumeysiga, karinta, biyaha kuleylka, iwm.
Cabbirka Badeecadda: 51.2x42.5x41.8cm (bilaa tuubooyin)
Xajmiga kartoonka: 48.2x25x35.5cm
Miisaanka: NW: 9.5KG GW: 11.5KG
Ballaca Shimbiga: 60 mm
Talooyin ku Saabsan Qalabka: Ku darida korantada wax lagu karsado, waxaan kugula talineynaa qabqable, qiiqa qiiqa, haanta biyaha, xirmada biligleynaya iyo gogosha dabka laga ilaaliyo. Qalabkani wuxuu kaa caawinayaa sii deynta qiiqa dabka, kaa fogeeya dhibaatada qiiqa dabka, ka ilaaliya marsada inay daadato, taasoo keeneysa qatar nabadgelyo iyo inay ku fiicnaato dhalaalida barafka iyo barafka loogu talagalay biyaha la cabbo, iyo marka kariyaha uu si hufan u gubanayo haanta ayaa karkarin doonta biyaha daqiiqado gudahood mahadnaq ahaan meesha ay ku yaalliin xagga dambe ee cooktop-ka iyo salka tuubada qiiqa oo kuleylka ku urursan yahay.
Mini Wood Shooladda Sawirka
Hore: Nadiifiyeyaasha Qoryaha Birta ah ee ahama
Xiga: Foornada Nadiifka ah ee Kaamamka Nadiifka ah ee Lagu Qaadan Karo Oo leh Muraayad
Isku laaban foornada alwaaxda gubta
jiko yar oo alwaax ah
Foornooyinka Teendhada Darbiga
Bannaanka Alwaaxda Gubashada, shooladda birta ah ee birta ah, Teendhada Qoryaha Teendhada, Kaamamka Biyaha Lagu kariyo ee Kaamamka ah, Foornada Cuntada lagu karsado, Kaam Dabka Gubay,